Navoaka ny sary an-gazety Blackberry DTEK60 | Vaovao momba ny gadget
Ny BlackBerry DTEK60 no terminal fahatelo an'ny orinasa kanadiana, ilay nilaza fa tsy hanilika ny rafitra fiasany manokana ho an'ny finday amin'ity taona ity. Hafa ny zava-misy ary raha amin'ny fahavaratra dia efa nanolotra ny DTEK50 ianao, dia manana iray hafa voaomana ao ambadiky ny sehatra hitondranao azy eny amin'ny tsena amin'ny 11 Oktobra.
Tao anatin'ny volana vitsivitsy tamin'io DTEK50 io, ny orinasa kanadiana dia saika vonona ny hampiditra smartphone Android vaovao iray hafa, izay ny BlackBerry DTEK60, ilay fitaovana Android fahatelo avy amin'ity orinasa ity izay hahita ny hazavan'ny 11 Oktobra rehefa aseho ao Canada. Izao dia manana isika sary vitsivitsy bebe kokoa amin'ity fitaovana ity.
Ireo sary ao amin'ny vahaolana ambany Ahitana taratra ny fahasamihafana sasany amin'ny DTEK50 izy ireo, indrindra amin'ny mety ho endrika amboarina miaraka amina endrika voadio kokoa, na dia mizara toetra vitsivitsy aza izy ireo, satria eo ambanin'ny andiany DTEK iray ihany izy ireo.
Ny BlackBerry DTEK60 dia misy zorony miolakolaka, na eo anoloana na any aoriana, ary hiresaka momba ny finday avo lenta izay mandeha any amin'ny toerana avo isika. Efa ao amin'ilay famoahana teo aloha avy amin'ireo andalana ireo, fantatray fa hanana ianao a 5,5-inch Quad HD fampisehoana (1440 x 2560) ary izany dia manana ny chip Qualcomm Snadpragon 820 ao anaty vavony. Ny endri-javatra hafa dia ny RAM 4 GB, fahatsiarovan-tena 32 GB, fakantsary aoriana 21 MP, fakan-tsary 8 MP eo aloha ary bateria 3.000 mAh. Ny iray amin'ny antsipiriany hafa dia ny hoe izy no BlackBerry voalohany nampiditra sensor ho an'ny dian-tànana, eo ambanin'ny fakantsary miorina eo aorina.
Ny BlackBerry DTEK60 dia hanana ny androny lehibe any Canada ho an'ny 11 Oktobra, ary fantatra fa 530 dolara ny vidiny. Fitaovana iray izay mankany amin'ny farany ambony hiady amin'ireo Huawei, Samsung, HTC ary ny hafa hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Sary an-gazety an'ny BlackBerry DTEK60 tafaporitsaka
Manomboka manadio ny fivarotana app an'ny Apple